China ny fizotry ny famokarana mpamokatra sy mpamatsy mena oksida vy | Shencai Pigment
fizotry ny famokarana mena oksida vy
Misy dingana roa famokarana lehibe amin'ny vy oksida mena: maina sy lena. Androany isika dia hijery ireo fizotrany roa ireo.
1. Amin'ny fizotra maina
Ny dingan'ny maina dia doka nentim-paharazana sy tany am-boalohany misy oksida vy any Sina. Ny tombony azony dia ny fizotry ny famokarana tsotra, ny fikorianan'ny dingana fohy ary ny fampiasam-bola kely kokoa. Ny fatiantoka dia ny kalitaon'ny vokatra somary mahantra, ary ny entona manimba dia vokarina mandritra ny fizotran'ny fanaovana kajy, izay misy fiatraikany miharihary amin'ny tontolo iainana. Toy ny fomba fanaovana kajision jarosite dia maro ny gazy misy solifara vokarina mandritra ny fizotran'ny fanaovana kajy.
Tao anatin'izay taona lasa izay, mifototra amin'ny fampiasana feno vy misy fako, nipoitra ny teknolojia maina toy ny metaly solifara asidra sy ny fomba fanangonam-boasary vovoka vy eto amin'ny firenentsika. Ny tombony azo amin'ireny fizotran-javatra ireny dia dingana tsotra ary tsy fampiasam-bola firy, ary ny fatiantoka dia ambany ny haavon'ny kalitaon'ny vokatra, izay tsy azo ampiharina amin'ny saha farany ambany ihany, ary maro ny gazy manimba no vokarina amin'ny fizotry ny famokarana, izay misy fiatraikany lehibe amin'ny tontolo iainana.
2. Amin'ny dingana lena
Ny fizotran'ny lena dia ny fampiasana ferrous sulfate na ferrous nitrate, ferric sulfate, ferric nitrate ho akora fototra, amin'ny alàlan'ny fanomanana voalohany ny voa kristaly, avy eo ny fitrandrahana hanomanana ny fomba famokarana vy mena vy. Ny akora ampiasaina dia mety ho sulfate ferrous na nitrate ferrous solid material, na vahaolana aqueous misy sulfate ferrous, nitrate ferrous, sulfate ferric ary nitrate ferric. Ny neutralizer ampiasaina dia mety ho vy, vy, alkaly na amoniaka.
Ny tombony amin'ny fizotran'ny lena dia miankina amin'ny kalitao tsara sy ny fahombiazan'ny vokatra. Ny karazan-tsolika misy oksida vy dia azo omanina. Ny fatiantoka dia mitoetra amin'ny fizotra lava, fanjifana angovo betsaka amin'ny fizotry ny famokarana, ary famokarana rano maloto sy asidra betsaka no mamokatra. Amin'izao fotoana izao dia misy ny tsy fahampian'ny fomba fampiasa amin'ny fomba feno, izay misy fiatraikany lehibe amin'ny tontolo iainana.
Raha fintinina, misy karazany maro ny fizotry ny famokarana mena oksidana vy, ireo fizotran'ny famokarana ireo miaraka amin'ny tombony azony avy dia manohy mampiroborobo ny indostrian'ny pigment oxide vy, hanomezana fahafaham-po ny famokaran'ny olona.